GW zvese zvigadzirwa zvelaser zvakavakirwa pa976 nm pombi tekinoroji, yakakwira electro-optical kutendeuka kushanda zvakanaka, kupenya kwepamusoro kwesimba rimwe module dhizaini, inovandudza zvakanyanya kucheka kweLaser, Laser welding, Laser additive kugadzira uye Laser surface kurapwa, etc. Kunyanya nyowani inotakurika mweya wakatonhodzwa. handheld welder, kushanda kuri nyore, 4X kukurumidza kumhanya, yakawanda-inoshanda data pasuru yekubatanidza.
A1500W-Welder Inotakurika Mhepo Yakatonhodzwa Fiber Laser Handhe...
1000W compact Single Mode CW Fiber Laser sosi
8000W yakakwira simba multimode CW faibha laser sosi
1500W Mhepo yakatonhorera fiber laser sosi
1000W Mhepo yakatonhorera fiber laser sosi
3000W Yakakwira Kupenya Imwe Modhi CW Fiber Laser sosi
SMATLas 4S yakatevedzana imwe modhi inoenderera mberi fiber laser, ine 976nm pombi tekinoroji, yemagetsi-Optical shanduko inoshanda kusvika 42%, nyowani nyowani yekutarisa chimiro dhizaini, kuwedzera kubatanidzwa, diki saizi, nyore kubatanidza uye kugadzirisa, akawanda danda modhi sarudzo, 3000w single modhi. kubuda ne 20μm faibha musimboti, simba density inosvika 24000KW/mm ^2,M^2<1.3,kunyanya akakodzera kana kucheka uye kushandisa kunoda yakakwirira simba density.
2000W Yakakwira Kupenya Imwe Modhi CW Fiber Laser sosi
5Q-030HQ 3000W QCW Quasi-inoenderera mberi fiber laser source
SMATLas 5Q yakatevedzana quasi-inoenderera mberi fiber laser ine yakakwira kuburitsa simba, yakakwira pulsing peak simba, yakanyatsokodzera yakakwirira peak simba, kureba kupuruzira hupamhi, kutonhora kugadzirisa maindasitiri nharaunda, senge nzvimbo welding, mutsara welding, kudhirowa, kucheka chaiko, nezvimwe. zviri nyore kusanganisa uye kudzikisa mutengo wekugadzirisa zvichienzaniswa neyechinyakare YAG laser.
5Q-020HQ 2000W QCW Quasi-inoenderera mberi fiber laser source
5Q-015HQ 1500W QCW Quasi-inoenderera mberi fiber laser source
5Q-010HQ 1000W QCW Quasi-inoenderera mberi fiber laser source
1000W yakakwira simba pulsed fiber laser sosi
Iine GW yakasarudzika yese-fiber modulation pulse uye imwe chete modhi yakakwirira kupenya tekinoroji, 4P single modhi HB pulse fiber laser haingo wedzera MAX peak simba kusvika ku10KW, MIN pulse wide,100ns, asi zvakare gadzirisa Gauss, HBF, D modhi uye zvichingodaro. flexible inobuda danda modhi yevashandisi 'application zvinodiwa. Zvichakadaro, gadzirisa 4P yakatevedzana pulse inodzokororwa frequency, pulse wide, peak simba, zvakare tsika tsanangura yakakosha kubuda waveform kune akasiyana application zvinodiwa.
500W yakakwira simba pulsed fiber laser sosi
200W yakakwira simba pulsed fiber laser sosi
A1500W-Welder Inotakurika Mhepo Yakatonhodzwa Fiber Laser Handheld Welder
GW inotakurika fiber laser handheld welder yakavakirwa pa976nm pombi tekinoroji, Iyo iripo laser welder zvishandiso pamusika zvinonyanya kutonhorera-mvura mhinduro, kureva, kupisa kunotorwa kunze kwelaser kuburikidza nekutenderera kwekunze kwechiller. GW inotarisa kuenderera mberi kwekukurukurirana uye hunyanzvi hwakavakirwa pa976nm tekinoroji, yakasanganiswa neiyo yakakwirira photoelectric shanduko inoshanda ye976nm Yakagadzirisa zvine hungwaru dambudziko remhepo-yakatonhodzwa firiji kugona, yakatanga tekinoroji inotonhorera 976nm kekutanga muindasitiri, yakagadzirisa simba. mashandisiro uye nyaya dzekutakura, uye zvakare tungamira tekinoroji yekuvandudza kutungamira kwefiber lasers.
A1000W-Welder Inotakurika mhepo yakatonhodzwa faibha laser handheld welder
GW 3000W single mode CW faibha laser module
Kubva pa976nm pombi tekinoroji, 3000W GW single modhi CW fiber laser module ndiyo yedu yakakura yakajairwa laser module chigadzirwa. Pasina ACDC magetsi ekupa, inogona kusanganiswa kune yakakwirira simba multimode fiber laser sosi. Yakapedzwa yakavharwa ne IP 65 level. Huremu hungori 20kg DYI laser sosi zvikamu, single mode fiber laser zvikamu.